လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ (၃) - The Dark Knight: ဒဏ္Legာရီပေါ်ပေါက်လာခြင်း
ကွာပေးရအားကစားပြိုင်ပွဲအသစ်ဖြန့်ဝေ။ ယနေ့တွင် The Dark Knight: ဒဏ္Legာရီပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာသည်။
CreeRom V10 သည် Samsung Galaxy S model GT-I4.2 အတွက် Android 9000 ကို အခြေခံ၍ အလုပ်လုပ်နိုင်သော roms တစ်ခုဖြစ်သည်။
Samsung SCH-W2013 ဇိမ်ခံဖုန်းဖြစ်သည်
Samsung SCH-W2013 သည်တန်ဖိုးနည်းလူကြိုက်များသောစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး RRP တွင်ယူရို ၃၀၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လက်ဆောင်အစုံ (II): NOVA 3
ယနေ့ဂိမ်းများကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက်ဒုတိယအရောင်းအ ၀ ယ်တွင်သင့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော NPS NOVA3ခေါ်ဆောင်လာပါမည်။
XDA ၌ Nexus 10 Toolkit ယခုရနိုင်သည်
Nexus 10 Toolkit သည် Google Nexus 10 တက်ဘလက်အတွက် All-in-one ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားအရာများအကြားအမြစ်သို့မဟုတ်အမြစ်ကိုဖြုတ်နိုင်သည်။
Elitemovil Alpha မှ Samsung Galaxy S, Rom Android 4.2 ဖြစ်သည်
HTCManía elitemovil နှင့်သူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှစားဖိုမှူးမှဖန်တီးခဲ့သော Samsung Galaxy S အတွက် Android 4.2 ဖြင့်အသစ်သော Rom ဖြစ်သည်
Motorola RAZR HD နှင့် RAZR MAXX HD မကြာမီ Jelly Bean ကိုရနိုင်သည်
Motorola သည် Android 4.1 Jelly Bean ၏အဓိကစမတ်ဖုန်းများ၊ RAZR HD နှင့် RAZR MAXX HD မော်ဒယ်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။
လက်ဆောင်အစုံ (ငါ): Dead အာကာသ
Dead Space Saga ၏မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည်။ Android အတွက်အကြီးအကျယ် hitters တစ်ခုမှာ။
Tablet အတွက် Android အတွက် Skype ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
Skipe သည် Android Tablet ရှိသည့်နေရာအားလုံးကိုစဉ်းစားရန်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းစက်ပေါ်ရှိကွန်ဖရင့်မတိုင်မီကထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
Google Nexus 10 မှာ Samsung Galaxy ရှိတယ်
Google Nexus 10 ကိုဖြုတ်သည့်အခါ Samsung Galaxy Tab 10.1 ၏မူလအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အပိုင်းအချို့ရှိနေခြင်းကိုသတိပြုမိနိုင်သည်။
Nexus4Toolkit V1.0 all-in-one ကိရိယာတစ်ခု
Nexus4Toolkit V1.0 သည် All-In-One ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Windows drivers, root, Recovery နှင့်အခြားအရာများထည့်သွင်းနိုင်သည်။
တက်ဘလက်စစ်ပွဲများ - ဘယ်အမြတ်အစွန်းများများထုတ်ပေးမလဲ။
LG F240K သည်အဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းဟုကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်
LG F240K သည် GLBenchmark ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွင်းတွင်ထင်ရှားပြီးမျက်နှာပြင်ကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင် resolution ကိုတွေ့ရသည်။
Motorola က Atrix HD Developer Edition အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Custom Motor ROM များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဖွင့်ရန် Motorola atrix HD Developer Edition သည်၎င်း၏ဖုန်း၏ဗားရှင်းအသစ်ကို Motorola ကတင်ပြခဲ့သည်
My Little Pony သည် Android သို့ဗီဒီယိုဂိမ်းပုံစံဖြင့်လာသည်
My Little Pony: Friendship is Magic သည်အင်တာနက်ဖြစ်စဉ်တွင် Android တွင်ဂိမ်းတစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S, Rom Tsunami X3.3 အသစ် update
ဒီနေရာမှာ Samsung Galaxy S model GT-i9000 အတွက်အကောင်းဆုံး Jelly Bean rom ဖြစ်လာမယ့်ဗားရှင်းအသစ်ဒီမှာပါ
WhatsApp နှင့် Movistar ဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာများ
Movistar ၏အဆိုအရ WhatsApp သည်စနစ်ကျဆင်းမှုအတွက်နို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်တွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပျက်ကွက်မှုအသစ်များကိုကာကွယ်ရန်မည်သည့်အစီအမံများပြုလုပ်မည်နည်း။
Android အရောင်းမြှင့်တင်မှုများနှင့် Black သောကြာနေ့အထူးလျှော့စျေးများကိုရယူပါ
၇ လက်မသို့မဟုတ် ၁၀ လက်မရှိသော Galaxy Tab2ကိုအထူးလျှော့စျေးဖြင့်ဝယ်ယူခြင်းသည် Black Friday အတွက်၎င်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာတွင်ဖြစ်သည်။
Ralph! - Disney ရုပ်ရှင်ကိုဖျက်လိုက်ပါ။ Android မှာသူ့ရဲ့ဂိမ်းကိုရပြီ
Disney ၏လာမည့်ကာတွန်းကားဖြစ်သော Wreck-It Ralph အတွက်တရားဝင်ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုယခု Google Play စတိုးတွင်ရနိုင်သည်။
LIFX၊ Android မှထိန်းချုပ်ထားသောလျှပ်စစ်မီးသီးအသစ်များ
ဟော့ဘစ် - အလယ်ကမ္ဘာမြေ၏တိုင်းနိုင်ငံများကိုယခုရရှိနိုင်သည်
Hobbit တွင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဆင်ရုံသာမကဂိမ်းများစွာလည်းပါလိမ့်မည်။ ဒီနေ့ Android အတွက်သူ့ရဲ့ဗားရှင်းအကြောင်းပြောကြတယ်။
Samsung Galaxy S3 က "ငါသည်လောက၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏"
Samsung Galaxy S3 သည်ကမ္ဘာ့အရောင်းရဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်လာပြီး Apple ၏အနန္တတန်ခိုးရှင် iPhone 4s ထက်ကျော်လွန်သွားသည်။
Samsung Galaxy S, Rom F1 Galaxy SII V8 နောက်ဆုံး Beta XXJVU
၎င်းသည် Gingerbread Android 2.3.6 rom ဖြစ်ပြီး Samsung Galaxy S အတွက်မူရင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ မူရင်းရေဒီယို၊ မူရင်းကင်မရာနှင့် Samsung အက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်သည်။
Angry Birds Star Wars နောက်ဆုံး Trailer
Angry Birds Star Wars သည်ငါတို့၏ဂိမ်းနှင့်ငှက်အမျိုးအစားများကိုအနီးကပ်ဖော်ပြသည်။
တက်ဘလက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း: Nexus7နှင့် iPad mini
Nexus7တက်ဘလက်နှင့် Apple ၏မကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့သော iPad mini နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသောဆန်းစစ်ချက်
android ဗားရှင်းသစ်ကိုထုတ်ပေးရင်တောင်လက်ရှိထုတ်ကုန် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာ Gingerbread မှာရှိနေပါပြီ။
Rom Glazed V2.1 သည် CM10 အခြေစိုက်စခန်းအောက်တွင်ချက်ပြုတ်ထားသော Google Nexus7နှင့်တန်းတူမရှိဘဲတည်ငြိမ်မှုနှင့်မြန်နှုန်းကိုပေးထားသည်။
Samsung Galaxy Premier၊ Android စမတ်ဖုန်းသစ်၏တရားဝင်အချက်အလက်များ
Samsung ယူကရိန်းသည် Samsung Galaxy Premier မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့ပြီး AndroidSIS မှနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဖော်ပြပေးထားသည်
download ပြုလုပ်နိုင်သည့် LG Nexus4၏ full rom
LG Nexus4၏အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်သည့်စနစ်သည်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်။ နောက်ခံပုံများ၊ အသံများနှင့်သီးသန့် application များ။
Tsunami X3.0, Samsung Galaxy S အတွက် update
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနည်းလမ်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး Samsung Galaxy S အတွက် Tsunami X3.0 အသစ်ဖြစ်သော Tsunami rom version ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ
Samsung Galaxy S3 အတွက်နောက်ထပ် Jelly Bean ROM သည် Samsung ၏မူလ Android XXDLJ4 ကိုအခြေခံသည်
Samsung Galaxy S2, Rom Rootbox, v3.0 ဗားရှင်းသစ်
Rom Vanilla Samsung Galaxy S3 မော်ဒယ်များအတွက် GT-I2 နှင့် GT-I9100P အတွက်တတိယမြောက်ဗားရှင်း
Tsunami X2.5, Samsung Galaxy S အတွက် update
Samsung Galaxy S model GT-I9000 ဖြစ်သော Tsunami X2.5 အတွက်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံး rom version သစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤနေရာတွင်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။
သင်၏မိုဘိုင်း၏ 3G ဆက်သွယ်မှုကို WiFi ကွန်ယက်တစ်ခုပေါ်တွင်မျှဝေပါ
Android ထုတ်ကုန်အသစ်များသည် 3G ဒေတာဆက်သွယ်မှုကိုဝေမျှနိုင်ပြီးအင်တာနက်ရှိရန်အခြားကိရိယာများအတွက် WiFi ကွန်ယက်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်
ကလေးများအတွက်ကစားစရာများ၊ ကစားစရာများသို့မဟုတ်အခြားအရာများအတွက် Android တက်ဘလက်များ
Tabeo နှင့် Kindle Fire တို့သည် Android tablet များ၏မော်ဒယ်လ်နှစ်မျိုးဖြစ်ပြီးခုခံနိုင်မှုကြောင့်ကလေးများပြproblemsနာမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်
Omega V28 rom သည် Samsung Galaxy S3 အတွက် Android Jelly Bean 4.1.2 ကိုအခြေခံသောအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရီးရဲလ်ဘောလုံးအသင်းသည် ၂၀၁၃ ဖြစ်သည်
Gameloft တီထွင်ခဲ့သော Falcao ၏ပုံရိပ်ဖြစ်သော Real Football 2013 ၏နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ယခုတွင်ရှိနေသည်။
Samsung Galaxy S4.1.2 အတွက် RootBox Rom Jelly Bean 2
နောက်ဆုံးပေါ် Android2ဗားရှင်းဖြင့် Samsung Galaxy S4.1.2 အတွက်အကောင်းဆုံး roms တစ်ခုဖြစ်သည်
Beastie ဂလားပင်လယ်အော်, Kairosoft ၏«ပိုကီမွန်»
Beastie Bay သည်၎င်း၏ဂိမ်းစနစ်တွင်ပိုကီမွန်ကိုအလွန်အမင်းသတိရစေသည့်အပြင် Kairosoft ၏ပထမဆုံး Android ဂိမ်းဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S, Galaxy S3 ၏ TouchWiz Launcher
Samsung Galaxy S3 ၏မူလ TouchWiz Launcher ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းမှတဆင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းခြင်းအတွက်သင်ခန်းစာ
My Perry ဘယ်မှာရှိသလဲ။
ငါ့ပယ်ရီဘယ်မှာလဲ။ စီးရီးမှယူ Castilian အတွက်အသံများနှင့်၎င်း၏ update ကို 20 အသစ်အဆင့်ဆင့် 1.1.0 ကိုလက်ခံရရှိသည်
Dora Team Android3မှ Samsung Galaxy S1.1 Rom Immortal V4.1.1
Samsung Galaxy S1.1 အတွက် Immortal Rom V3၊ ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းနှင့်အသေးစိတ်တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း၊ အဆင့်ဆင့်နှင့် kernel cleaner ပါ ၀ င်သည်။
Tsunami x2.0 ရှိ Rom Control နှင့် Ota Updater
Tsunami x2.0 သည် Samsung Galaxy S အတွက်ရှာဖွေနိုင်သောအကောင်းဆုံး Jelly Bean roms များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Rom Control နှင့် OTA Updater ကို menu ထဲထည့်သွင်းထားသည်။
Samsung Galaxy S အတွက် Xperia ပုံစံကီးဘုတ်
swipe typing ကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် Samsung Galaxy S အတွက် Xperia ကီးဘုတ်ကို download လုပ်ပါ။
Samsung Galaxy S, Rom Tsunami X2.0၊
Tsunami X2.0 rom သည် Samsung Galaxy S အတွက် Jelly Bean rom ဖြစ်ပြီးယခုအချိန်တွင်အအောင်မြင်ဆုံးနှင့်အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်သည်။
ငါ့ရေဘယ်မှာလဲ။ လာမယ့် Frankenweenie ကမှုတ်သွင်းအဆင့်ဆင့်ကိုရယူပါ
ငါ့ရေဘယ်မှာလဲ။ လာမယ့်ဒစ္စနေးကာတွန်းကားဖြစ်တဲ့ Frankenweenie မှအဆင့်ဆင့်အသစ်များကိုရယူပါ။
Google Nexus 7, Toolkit V2.0.0 all-in-one ကိရိယာတစ်ခု
Google Nexus 2.0.0 အတွက် Toolkit V7 သည် Recovery ကို install လုပ်ပြီး rooting အထိဘာမှမလုပ်နိုင်အောင် tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်လူတိုင်းအတွက် Jetpack Joyride!
Halfbrick စတူဒီယိုဖြစ်သော Jetpack Joyride မှအကောင်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးတွင် Android သုံးစွဲသူအားလုံးထံသို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။
Aroma Installer ဖြင့် Samsung Galaxy S2, Rom Resurrection Remix JB AOKP
Android Jelly Bean ပါသည့် Samsung Galaxy S3.08 အတွက် Resurrection Remix V2 rom ၏တင်ပြခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း။
Samsung Galaxy S, Rom Tsunami X1.5, Jelly Bean နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအချိန်ကောင်းဖြစ်သည်
ဒီတစ်ခါတော့ငါမင်းကို Tsunami X1.5 rom၊ Samsung Galaxy S အတွက်အကောင်းဆုံး Jelly Bean rom၊ ငါကြိုးစားခဲ့သမျှအမြန်ဆုံးနှင့်အသုံးဝင်ဆုံး rom ကိုပြသသည်။
Samsung Galaxy S GT-I1.8.0 OTA အတွက် C-Rom Bean 9000
Android 4.1.1 Jelly Bean Rom သည် C-Rom အသင်းမှ Samsung Galaxy S, C-Rom Bean 1.8.0 အတွက်ဖြစ်သည်
အခမဲ့ Sense ပုံစံနာရီဝစ်ဂျက်အထုပ်များ
QissMe Rom၊ HTC၊ Motorola နှင့် Samsung တို့အတွက်မူကွဲအသစ်များ
QissMe Rom သည်ဂရပ်ဖစ်ရှုထောင့်နှင့်ကြည့်ရှုသော roms များဖြစ်ပြီးဆမ်ဆောင်း၊ HTC နှင့် Motorola နှင့်လိုက်ဖက်ညီစွာအလုပ်လုပ်သည်။
အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များအတွက် Rom Jelly Bean Android 4.1.1 Codename 3.5.0
Codename 3.5.0 သည် Cyanogen နှင့် AOKP တို့၏နောက်ကွယ်တွင်ယုတ္တိနည်းအရ devices များပိုမိုထောက်ပံ့သော ROM များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Wonderland မှ Zombie Panic သည် Android အတွက်ဖြစ်သည်
WiiWare နှင့် iOS တို့ကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက် Wonderland မှ Zombie Panic သည် Android သို့ရောက်ရှိမည်။
Metal Gear Solid: Social Ops အသစ်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို Hideo Kojima ဖန်တီးခဲ့သော Saga တွင်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများအတွက်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည်။
နောက်ဆုံး MackayRom V1.2.3 ၏အရစ်ကျအောင်မြင်မှုသည်အောင်မြင်နေပြီ ဖြစ်၍ ဤစာတမ်းတွင် Samsung Galaxy S တွင်မည်သို့ပုံဖော်ပုံကိုဗီဒီယိုပြသမည်။
Samsung Galaxy S OTA နှင့် Touchwiz အတွက် C-Rom Team CM10
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Samsung Galaxy S. အတွက် CM10 ကိုအခြေခံထားတဲ့နောက်ထပ် Jelly Bean rom, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကို Android 4.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်မယ့်အရည်အသွေးမြင့်အလုပ်။
Enchant U, Glu Mobile မှအသစ်
Glu Mobile သည် Eternity Warriors2မှပြောင်းလဲသွားသော Enchant U သို့ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်။ ဘာအကြောင်းလဲကြည့်ချင်လား ဆက်ဖတ်ရန်။
Prince of Persia ၏သရုပ်ဆောင်မှုသည် Android အတွက်ဖြစ်သည်
Android သို့ရောက်ရန် XBLA, Ps3 နှင့် iOS ကိုဖြတ်သန်းရပေမည်။
LG L3 E-400 တွင် recovery ကို root လုပ်ပြီး install လုပ်နည်း
LG L3 E400 တွင်ပြုပြင်ထားသော Recovery သို့မဟုတ် ClockworkMod recovery ကို root လုပ်ပြီး install လုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောအဆင့်ဆင့်သင်ခန်းစာ။
Samsung Galaxy Note 2, သန်း ၂၀ ရောင်းချရန်မျှော်လင့်ရသည်
Samsung သည်၎င်း၏ phablet Samsung Galaxy Note 20 ကိုယူနစ်သန်း ၂၀ အထိရောင်းချရန်မျှော်လင့်ထားပြီးပထမ ဦး ဆုံး Note Version ထက်နှစ်ဆဖြစ်လာသည်
Samsung Galaxy S, Rom Miui V4.1 Jelly Bean Muchopoli83 ဗားရှင်း 2.9.7
Android 4.1.1 Jelly Bean နှင့် Miui roms များ၏အရည်အသွေးနှင့်အတူ Samsung Galaxy S အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်သည်။
Android ရှိမိုဘိုင်းကင်မရာကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုသော application အချို့ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်
Samsung Galaxy Nexus, Gnex Toolkit v7.8၊ အရာအားလုံးအတွက်ကိရိယာတစ်ခု
Gnex Toolkit v7.8 သည် Windows အတွက်အခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Galaxy Nexus တွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သမျှလုပ်နိုင်သည်
UnlockRoot သည် ၀ င်းဒိုးအတွက်အခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာကျွန်ုပ်တို့သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများစွာကိုအမြစ်သို့မဟုတ်နုတ်ပစ်နိုင်သည်။
တရားဝင် Android 4.1 Jelly Bean ကို Samsung Galaxy Note နှင့် Tab တွင်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်သည်
Android 4.1 Jelly Bean ကိုတရားဝင် ROM များမှတဆင့် Samsung ထုတ်ကုန်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်
အံ့: ခြင်း: Avengers Initiative သည် Hulk မှစတင်ခဲ့သည်
The Avengers သည် Marvel: Avengers Initiative ၏လက်မှ Android သို့ရောက်လာသည်
ပါမောက္ခလွိုင်တန်က Android အတွက်ကြေငြာခဲ့သည်
နာမည်ကြီးပါမောက္ခ Layton နှင့်သူ၏တပည့်ဖြစ်သူ Luke သည် DS ဂိမ်းများစွာ၏ဇာတ်ကောင်များဖြစ်သော iOS နှင့် Android တွင်ရောက်ရှိမည်။
Samsung Galaxy S အတွက်အကောင်းဆုံး Jelly Bean Rom, GT-I9000 model, Team RemICS အဖွဲ့မှအထင်ကြီးစရာကောင်းသော rom
ကောလဟာလများက Motorola စမတ်ဖုန်းအသစ်ကို borderless touchscreen ပါ ၀ င်သည်
Metal Gear Solid: Special Ops သည် Android အတွက်ဖြစ်သည်
Metal Gear Solid: Special Ops ကြောင့် Android ပေါ်တွင် Hideo Kojima ဖန်တီးခဲ့သော Saga များကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားနိုင်သည်
Samsung Galaxy SII, Rom SuperNexus - I9100 - Android2ကိုတည်ဆောက်သည်
Rom သည် Samsung Galaxy SII အတွက် Samsung Galaxy Nexus မှ Android 4.1.1 Jelly Bean ဗားရှင်းတွင်တိုက်ရိုက် ported ခဲ့သည်။
Samsung Galaxy Note 1 နှင့်2ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
ပထမဆုံး Samsung Galaxy Note သည်စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်ဒြပ်စင်များပေါင်းစပ်မှုအတွက်ထင်ရှားပေါ်လွင်ခဲ့သည်။ ဖုန်းတစ်လုံးပါ ...
Sony Xperia T ဆိုနီ၏သားရဲသည်နောက်ဆုံးတွင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Sony သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါသည့် terminal Xperia T ကိုတင်ဆက်ခြင်းဖြင့် IFA 2012 တွင်ခေါင်းလောင်းထိုးခဲ့သည်။
Sony Xperia V, NFC One Touch နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောရေစိုခံစမတ်ဖုန်းအသစ်
IFA 2012 သည် ဆက်လက်၍ ဆေးလိပ်သောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယခုအခါ Sony ၏အလှည့်သည်ရေစိုခံနိုင်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Sony Xperia V ကိုတင်ဆက်လိုက်သည်။
Samsung Galaxy S အတွက်အကောင်းဆုံး Miui Jelly Bean rom, download နှင့်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
setting အသစ်များနှင့်အကြောင်းအရာများသည် Dead Trigger သို့ရောက်သည်
အကြောင်းအရာအသစ်သည် Dead Trigger သို့ရောက်ရှိနေသည်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏နောက်ဆုံး update ကိုယူဆောင်သောအရာကိုအသေးစိတ်။
@elitemovil မှ Samsung Galaxy S၊ တရားဝင် Rom Android 4.1.1 RC10 ဖြစ်သည်
PC ၏ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်ပထမဆုံး Jelly Bean ဗားရှင်း၊ ယခု Samsung Galaxy S. အတွက်ရရှိနိုင်သည်။
muchopoli2.8.17 မှ Samsung Galaxy S၊ Rom MIUI Jelly Bean 83 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Samsung Galaxy S model GT-I9000 အတွက် Jelly bean base နှင့်ပထမဆုံး Miui Rom ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း
Sony Xperia J, Sony ၏ ၀ င်ရောက်မှုအသစ်
Sony Xperia J အသစ်ကို IFA 2012 မှာပြသမှာဖြစ်ပြီး Sony တံဆိပ်ပါတဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုကတိပေးထားတယ်
Samsung က Samsung Galaxy S Duos, dual SIM အထောက်အပံ့ပါသောစမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုပြသခဲ့သည်
Samsung က Samsung Galaxy S Duos ရဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုပြသလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး dual-SIM အထောက်အပံ့ပါသောအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
QissMe Rom၊ HTC၊ Samsung နှင့် Motorola တို့အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Roms များ
QissMe Rom သည်အသစ်အဆန်းများစွာနှင့်ဂရုတစိုက်ဂရပ်ဖစ်ဟန်ရှိသောတရုတ်ဇာစ်မြစ်၏ဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Sony သည် PSX ဂိမ်းများကို PlayStation Certified phones များတွင်ယူဆောင်လာမည်မဟုတ်ပါ
Sony သည် PlayStation 1 ဂိမ်းများကို PlayStation Certified phones များသို့ယူဆောင်လာခြင်းမရှိတော့ပါ
X Galaxy S Android, Rom X-Bean 1.0 4.1.1 XYunknown Android XNUMX
Samsung Galaxy S အတွက် Jelly Bean rom အသစ်၊ AOSP နှင့် CM10 တို့တွင်အကောင်းဆုံးပါဝင်သည်
Android ဖုန်းများ ၂၀၁၂ နှစ်ကုန်တွင်
ယခုနှစ်အကုန်တွင် Android ဖုန်းအသစ်များ၊ အဓိကကုမ္ပဏီများအတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်မော်ဒယ်များ
တက်ဘလက်များအတွက်အထူးပစ်လွှတ် Chameleon Launcher Beta
Chameleon Launcher သည်စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်များနှင့်ပြည့်စုံသည့် Launcher တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Tablet-type အမျိုးအစား Android ထုတ်ကုန်ကိုစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
Samsung Galaxy S, ClockworkMod Recovery ကို install လုပ်ရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခု
ClockworkMod Recovery ကို Samsung Galaxy S တွင် Odin မသုံးပဲထည့်သွင်းရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခု
HTC One X သည် Android 4.0.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်
HTC သည် One X အသုံးပြုသူများအတွက် Ice Cream Sandwich 4.0.4 အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရေးကြီးတိုးတက်မှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Samsung Galaxy SIII (GT-I06.3) အတွက် GlassRom V1 XXBLG9300 အသစ်
GlassRom v6.3 အသစ်ကို Samsung Galaxy SIII တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
ဒီ post မှာတော့ Samsung Galaxy S အတွက် Team Jelly Bean rom အတွက်အကောင်းဆုံး Jelly Bean rom ကိုငါတင်ပြမယ်။
Sony သည်ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်အတွင်းရောင်းချခဲ့သောစမတ်ဖုန်း ၈ သန်းနီးပါးရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ကျန်းမာရေးကိုပြသသည့်ပုံ။
RecoverX, ပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းကို Xperia terminal တွင်အလွယ်တကူ install နိုင်သည်
RecoverX နှင့် Sony Ericsson Xperia အကွာအဝေး၏ terminal အမြောက်အများတွင်ပြုပြင်ထားသော recovery ကိုထည့်သွင်းရန်သင်ခန်းစာ
သင်၏ terminal ကို Z4root ဖြင့် root လုပ်ပါ
Z4root သည် Android အတွက်အသုံးချဆော့ဝဲဖြစ်ပြီး Terminal အမြောက်အများကို root လုပ်ပေးလိမ့်မည်။ သင်ဒီမှာအခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။
Heimdall အတွက် autoflasheable firmware ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
Heimdall သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ကိုယ်ပိုင် auto-flash firmwares များကိုဖန်တီးရန်ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာ။
သူကအရမ်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်စပြုခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် Ouya ဖြစ်စဉ်ဟာပျံ့လွင့်နေပုံရတယ်။
Samsung Terminal များ၌ချက်ပြုတ်ထားသော rom ထည့်သည့်အခါမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိကောင်းစရာများ
သင်၏ Launcher 2.0 ကိုသင်၏မိုဘိုင်း (သို့) တက်ဘလက်ကိုခွဲခြားသိစေရန်လှပပြီးရောင်စုံသော Big Launcher XNUMX ဖြင့်သင်၏အိုင်ကွန်များနှင့် ၀ င်ရောက်မှုများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
Samsung Terminal တွင် Gps မည်သို့မှန်ကန်စွာပြင်ဆင်ရမည်နည်း
Android operating system ဖြင့် Samsung ဆိပ်ကမ်း၏ GPS ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ရိုးရှင်းသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ။
အဖွဲ့သည် Android Jelly Bean Samsung Galaxy S
Team Android Jelly Bean အဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့သည် Samsung Galaxy S အတွက်အလုပ်လုပ်သောမြန်ဆန်သည့်အမြန်ဆုံးအချိန်ကာလကိုရရှိသည်။
Samsung Galaxy S အတွက် Elite Team Jelly Bean Rom ဖြစ်သည်
Elite cook team မှဖန်တီးခဲ့သော Samsung Galaxy S အတွက် Jelly Bean rom ၏ Beta3သည်။
RTVE နှင့် SuperPaquito, Android ပါသောကလေးတက်ဘလက်များ
Heimdall ကို Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Linux operating system များမှ Samsung Galaxy မိသားစုဆိပ်ကမ်းများကို Flash လုပ်ရန် Heimdall ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Samsung Galaxy S (GT-I1980) အတွက် DerTeufel9000 မှပထမဆုံး rom Jelly Bean
သင်၏ Samsung Galaxy S ကို Android 4.1 Jelly Bean သို့ DerTeufel1980 မှ rom သုံးပြီးမည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်ကိုသိရှိရန်ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာ
LG Optimus 3D တွင် ClockWorkMod Recovery ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
LG Optimus 3D တွင် ClockWorkMod Recovery ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည့်ကိရိယာများအပါအဝင်ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows PC နှင့် Megatron tool ကို အသုံးပြု၍ LG Optimus 3D ကိုရိုးရှင်းစွာ root လုပ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာ။
Sony Xperia သည်အနီရောင်အစက် ၅ ဆုရရှိခဲ့သည်
Sony Xperia ဖုန်းသည်မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၂၀၁၂ အနီရောင်အစက်ဆုများ၌ဆု ၅ ဆုရရှိခဲ့သည်
Recovery ကို Samsung Galaxy Tab p1000n ထဲသွင်းနည်း
ClockworkMod Recovery ကို Samsung Galaxy Tab p1000n သို့ထည့်သွင်းနည်း
Windows မှာ Heimdall ဘယ်လို run မလဲ
Windows တွင် Heimdall မည်သို့တပ်ဆင်ရမည့်သင်ခန်းစာ။ Heimdall သည် GT-i9000 ကို flash လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမည့် odin အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်
Samsung Galaxy Tab7ကို Overcome နည်းလမ်းဖြင့်မည်သို့ Flash ရမည်နည်း
Samsung Galaxy Tab7"ဒါမှမဟုတ် p-1000 ကို Android 2.3.3 ကိုဘယ်လို Flash လုပ်မလဲ။ root လုပ်ပြီးပြုပြင်ထားသော Recovery ကို install လုပ်ပါ။
Samsung Galaxy S3သည် ClockworkMod Recovery ကိုအမြန်ဆုံးနှင့်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Odin3မှတဆင့် Samsung Galaxy S 3.04 တွင် ClockworkMod Recovery ကို install လုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာ
Elite မှ Samsung Galaxy S, Rom Gnex စတော့ရှယ်ယာ ၁.၄.၁ Android 1.4.1
Pure Stock Gnex 1.4.1 သည် Samsung Galaxy S သို့မဟုတ် GT-i9000 အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Elite rom ဖြစ်သည်။
Jelly Bean နှင့် ICS အတွက် Google Chrome ၏အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသောဗားရှင်းနှင့်တွေ့ဆုံပါ
Google Chrome သည် Android 4.0 နှင့်အထက် beta မှနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်ထားပြီးပိုမိုမြန်ဆန်သည်
Nexus Q သည်သင်၏အချက်အလက်များကို Google Play မှမျက်နှာပြင်များနှင့်စပီကာများထဲသို့ကူးယူပါ
စပီကာများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်အသံနှင့်ဗွီဒီယိုများဖွင့်ရန်ဂူဂဲလ်သည်ဂူးဂဲလ်ပလေယာနှင့်အမြဲချိတ်ဆက်ထားသောမာလ်တီမီဒီယာစင်တာ Nexus Q ကိုတင်ပြသည်
CyanogenMod9သည်ထုတ်ကုန်များစွာအတွက်၎င်း၏ပထမဆုံး RC ကိုလွှတ်တင်ခဲ့သည်
CyanogenMod9သည် Android Terminal များစွာအတွက်တရားဝင် Android 4.0 RC ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy Tab 7″ (p-1000) ကို Android 4.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
CyanogenMod 4.0.4 Nigthly Builds rom မှိတ်၍ Samsung Galaxy Tab ကို Android9သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း။
Samsung Galaxy tab p1000 ပေါ်မှာ ClockworkMod recovery ကို root လုပ်ပြီး install လုပ်နည်း
ClockworkMod Recovery ကို Samsung Galaxy Tab တွင်မော်ဒယ် p1000 တွင် root လုပ်ပြီး install လုပ်ရန်ပုံများပါသောအဆင့်ဆင့်သင်ခန်းစာ။
Smart Watch - Sony ၏စမတ်နာရီ
Sony Smart Watch ကိုတရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် Android operating system နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည့်ယူရို ၁၂၉ ဖြင့်သာရောင်းချသည်။
odin multi-downloader ဖြင့် Samsung Galaxy mini စီးရီးကို Flash လုပ်နည်း
odin multi-downloader ဖြင့် Samsung Galaxy mini စီးရီးများကိုမည်သို့ flash လုပ်ရမည်ကိုဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ။
Samsung Galaxy Tab မှာ Android 4.0 ကိုလာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်
Samsung ကဇူလိုင်လတွင် Galaxy Tab စီးရီးများ၏ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအတွက် Android 4.0 Ice Cream Sandwich ကိုစတင်ရောင်းချမည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Qiss me သည်တော်လှန်ရေးသမားများဖြစ်သောတရုတ်လူမျိုးများဖြစ်သော Galaxy S အပါအ ၀ င် Android ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်သည်
Android operating system နဲ့ Samsung Terminal များကိုဘယ်လို Flash လုပ်မလဲ
Sammobile သည် Samsung ထုတ်ကုန်အားလုံးထံအပ်နှံထားသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာဖြစ်သည်။ ၎င်းမှကျွန်ုပ်တို့မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သောကိရိယာများအားလုံးရှိသည်။
Samsung Galaxy S ကို CM9 မွမ်းမံနည်း
ညဘက်ညတွင် CM9 ဗားရှင်းအသစ်သို့ Samsung Galaxy S ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်မှန်ကန်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။
THD N2-A၊ Ice Cream Sandwich ဖြင့် MacBook ကူးယူထားသည်
THD N-2 မော်ဒယ်လ်သည် Android 4.0 အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သောအရောင်အသွေးစုံလင်သောလက်တော့ပ်မော်ဒယ်လ်ကိုပေးနိုင်ရန် MacBook ကော်ပီတစ်ခုဖြစ်သည်
MOD TouchWiz4Launcher v2 - Samsung Galaxy S အတွက် GB, CM7, ICS
Samsung Galaxy S အတွက် TouchWiz Launcher4V2 သည်ပြုပြင်ထားသော Launcher ပါ ၀ င်သည်။
Sony Xperia tipo, Dual SIM ပါသောစမတ်ဖုန်းအသစ်
Sony သည် Xperia tipo ဟုခေါ်သောအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းကို Dual SIM အထောက်အပံ့အတွက်ထူးခြားသည်။
Million Moments - သင်၏ဓာတ်ပုံများအတွက် Sony ရွေးချယ်စရာ
Million Moments သည်ဓာတ်ပုံများကိုစုစည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသည့် Sony application တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ပြခန်းသည်စံနမူနာယူစရာမလိုပါ။
Acer Iconia Tab A700 သည် IPS Full HD မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံး Android tablet ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy S2 ကို root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy S2 ကို root လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးနှင့်အတူ GT-i9100 ဟုလည်းခေါ်သည်။
Remics-UX သည် Samsung Galaxy S အတွက်အကောင်းဆုံး rom ဖြစ်သည်
Remics-UX သည် Samsung Galaxy S အတွက်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ CM9 ကိုညအချိန်တွင် အခြေခံ၍ နှင့် Samsung Galaxy SIII ၏ mods များစွာဖြင့်အခြေခံသည်။
Samsung Galaxy S3 ကို root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy S3 ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ root လုပ်ရန်ပုံများပါသောသင်ခန်းစာ။
Samsung Galaxy S, အတင်းအဓမ္မပိတ်ပစ်ခြင်းပြmultipleနာမျိုးစုံကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
Samsung Galaxy S. နှင့်အတူအာကာသဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းပြီး ICS roms တွင်အတင်းအကျပ်ပိတ်ပစ်ခြင်းဤသည်များသောအားဖြင့်ဒေတာဒေတာ partition ပြproblemနာဖြစ်သည်
ClockworkMod Recovery ကို Samsung Galaxy R i9103 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Samsung Galaxy R (သို့) GT-i9103 ဟုလည်းလူသိများသော Recovery ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆင့်ဆင့်သင်ခန်းစာ
Samsung Galaxy S Doc ၏ Master ICS V12 ကို rom download လုပ်ပါ
Doc's Master ICS V12 rom နှင့် Samsung Galaxy S. အတွက်အဆင့်ဆင့်တပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာကိုရယူပါ။
Samsung Galaxy S3 ကို firmware အပြည့်ရနိုင်သည်
Samsung Galaxy S3 ၏ Firmware အပြည့်အစုံကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းမှ developer များကသူတို့၏ software ကိုအခြားမိုဘိုင်းဖုန်းများသို့သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy Mini ကိုလုံးဝအခမဲ့ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
Samsung Galaxy mini ကိုရှစ်လုံးပါသောသော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုအခမဲ့ရယူနိုင်ရန်ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာ
Samsung Galaxy S (သို့) GT-I9000 ဟုလည်းသိကြသည့်လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်လိုအပ်သောကိရိယာများအပါအဝင် modem ကိုပြောင်းလဲရန်ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာ။
Rom Lightning Team: Huawei U8650 ဖြစ်သည်
Soonr Scribble for Galaxy Note - သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုမိုးတိမ်တွင်တည်းဖြတ်ပါ
သင်၏မှတ်တမ်းများကို Soonr cloud တွင်သိမ်းဆည်းပြီးမျှဝေပါ။ Soonr Scribble နှင့်အတူ Galaxy Note မှ ကျေးဇူးတင်၍ ၎င်းတို့ကိုတည်းဖြတ်ပါ။
Samsung Galaxy S, Viber app ပြissuesနာများကို ICS roms တွင်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
Samsung Galaxy S. တွင် ICS rom အသုံးပြုသူများအတွက်လက်တွေ့ကျသောသင်ခန်းစာ build.prop ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Viber ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်စေလိမ့်မည်။
Play Store မှအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ Samsung Galaxy S မိသားစု၏ဖုန်းမော်ဒယ်များကိုသော့ဖွင့်ရန်အဆင့်ဆင့်သင်ခန်းစာ။
Samsung Galaxy S, Rom Dark Knight ၅.၅
Samsung Galaxy S. အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Dark Knight ICS Android 4.0.4 rom update ကို
Samsung Galaxy S, Odin အတွက် XXJW4 တန်ဖိုး pack အသစ်ပြောင်းခြင်း
Samsung Galaxy S ကို Android 2.3.6 XXJW4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း Odin ကိုသုံးပြီး windows အတွက်။ XXJW4 သည်တိုးတက်မှုများစွာနှင့်အတူအဓိက update ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy S, Rom ကိုသန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ
Samsung Galaxy S, Rom ကိုသန့်ရှင်းစွာတပ်ဆင်ရန်ပုံများနှင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သင်ခန်းစာယူရန်။
Samsung Galaxy S3: လေးကောင်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့သားရဲ
Expnos3Quad core ပရိုဆက်ဆာအသစ်နှင့်အတူ Unpacked event တွင် Samsung Galaxy S4 ကိုစတင်မိတ်ဆက်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Samsung Galaxy S ကို Elite Rom သုံးပြီး Android 4.0.3 ကိုဘယ်လိုတရားဝင်တရား ၀ င်မွမ်းမံရမလဲ။ အထူးသဖြင့် ၉.၁ ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်နှင့် Samsung Galaxy S ကို Android 2.3.6 JVU သို့တရားမဝင်မွမ်းမံရန်ပုံများဖြင့်ရှင်းပြသည်။
Samsung က၎င်း၏ update ကိုစာရင်းထုတ်ဝေသည်
Google Cream မှ Ice Cream Sandwich ထွက်ရှိပြီးလအနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။ Android ထုတ်ကုန်များ၏ ၁% သာဤဗားရှင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဤနှောင့်နှေးရခြင်း၏အဓိကတရားခံမှာစမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များအတွက် Android ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်သို့မွမ်းမံနိုင်ခြင်းအပေါ်မှီခိုခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များ၏နောက်ဆုံးရက်ကိုနှောင့်နှေးစေသောထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည်။ Samsung သည် Gingerbread မှ Ice Cream Sandwich သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မည့်စက်ပစ္စည်းစာရင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
QualComm သည် Snapdragon S4 ပရိုဆက်ဆာအသစ်၏စွမ်းရည်များကိုသင်ကြားပေးသည်
Qualcomm သည်စမတ်ဖုန်းများနှင့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများအတွက် S4 ပရိုဆက်ဆာကိုတီထွင်ထားပြီးကင်မရာကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်နှင့်ပြည့်နေသလား။ ကျွန်ုပ်၏စက်ပစ္စည်း MB / GB အားလုံးဘယ်မှာသွားကြပြီလဲ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင် X MB / GB မှတ်ဉာဏ်ရှိပါကကျွန်ုပ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ရန်၎င်းတွင်အနည်းငယ်မျှသာကျွန်ုပ်ရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ Android စက်တွင် X GB ရှိပါကကျွန်ုပ်၏မှတ်ဉာဏ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှမြန်ဆန်စွာဖြည့်နိုင်သနည်း။ ဒီနေ့ဒီအဖြစ်အပျက်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြတော့မယ်။ ဒီအပိုင်းကအပိုင်းပိုင်း။
Sony Tablet P - ဆိုနီသည်ယူကေအတွက်ထုတ်ပေးသည်။ ဒုတိယတက်ဘလက်သည်ဆန်းသစ်တီထွင်သော၊ တော်လှန်ပြောင်းလဲသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူမတူညီသောတက်ဘလက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေသည်။
Samsung ကသူ့ရဲ့ Galaxy S ကိုမည်သည့်တန်ဖိုး pack နဲ့မဆို update လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး
ဟာ့ဒ်ဝဲကန့်သတ်ချက်များကြောင့်တရား ၀ င်ကြေညာချက်အရ Samsung ၏တတိယမြောက်ကြေညာချက်တွင် Samsung Galaxy S သို့မဟုတ်ယင်း၏ Galaxy Tab တက်ဘလက်အတွက်မည်သည့်တန်ဖိုးဗားရှင်းကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
Samsung ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် display များနှင့်အတူအနာဂတ်မျှော်မှန်းထားသည်
Samsung Galaxy Tab 10.1 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (အပိုင်းနှစ်)
Samsung Galaxy Tab 10.1 တွင်ပါဝင်သော software ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
Samsung Galaxy SII နှင့် iPhone 4S, ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု
SGSSII နှင့် iPhone 4S အကြားထိတွေ့မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
သင်နှင့်အတူ Xperia Play အတွက်ဂိမ်းများနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်
Sony Ericsson Xperia Play စမတ်ဖုန်း / ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသော်လည်းအမှန်တရားမှာ ...
Sony ၏ Android table များကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းပြီးဖြစ်သည်
Sony ၏ Android table များကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းပြီးဖြစ်သည်။
Samsung Premium Apps စတိုး - Android App Store အသစ်
Samsung Premium Apps Store - Android အတွက်လျှောက်လွှာစတိုးသစ်။
Sprint သည် Gingerbread ကို LG Optimus S ၏ကိုယ်ပိုင် Optimus One သို့ယူဆောင်လာသည်
Sprint သည် Gingerbread ကို၎င်း၏ LG Optimus One Optimus S ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်သည်
Samsung Galaxy S2, အမြန်ဆုံးဂရပ်ဖစ် hardware နှင့်အတူစမတ်ဖုန်း
Samsung Galaxy S2, အမြန်ဆုံးဂရပ်ဖစ် hardware smartphone
Android 2.3 Gingerbread ဖြင့် multimedia player ဖြစ်သော Sony Walkman Z
Sony Walkman Z, multimedia player Android 2.3 Gingerbread ပါရှိသည်။
Sony Ericsson Xperia Play 4G ကို AT&T မှပြုလုပ်သည်
Sony Ericsson Xperia Play 4G ကို AT&T မှပြုလုပ်သည်။
Android 2.3.6 Nexus S တွင် Gingerbread နှင့်သုံးစွဲသူများ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
Android 2.3.6 Nexus S တွင် Gingerbread နှင့်သုံးစွဲသူများ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် LG Optimus 3D (III) ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
LG Optimus 3D စမ်းသပ်မှု
Samsung SGH-i927 - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ QWERTY ကီးဘုတ်ပါရှိသော Galaxy 2
Samsung SGH-i927 - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ QWERTY ကီးဘုတ်ပါရှိသော Galaxy2။
Android 2.2 ဖြင့် Galaxy S Player ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏တတိယအပိုင်း
Lenovo IdeaPad K1: Android 3.1 နှင့် dual-core ပရိုဆက်ဆာ။
Galaxy S Player Wifi 5.0 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ဒုတိယအပိုင်း
Samsung Galaxy S Player 5.0 Wifi မီဒီယာဖွင့်စက်ဖွင့်စက်
Terminal, hardware နှင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းကိုပြောသောပထမအပိုင်းပြီးနောက်၊
Android 2.3 Gingerbread ပါသောရေစိုခံစမတ်ဖုန်း Sony Ericsson Xperia Active ။
Huawei MediaPad၊ Android Honeycomb နှင့် dual-core ပရိုဆက်ဆာတို့ပါရှိသည်။
Sony Ericsson TXT Pro သည်လူမှုကွန်ယက်များကိုချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
LG Optimus 2x ၏သုံးသပ်မှု၏တတိယအပိုင်း
Sony Ericsson Xperia Play အတွက်သီးသန့်ဂိမ်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။
LG Optimus Pad သည်စပိန်သို့ Vodafone နှင့်သီးသန့်ရောက်ရှိလာသည်။
LG Optimus Pad သည်စပိန်သို့ Vodafone နှင့်သီးသန့်ရောက်ရှိလာသည်။ တစ် ဦး ချင်း၊ အလွတ်နှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ပံ့သည်။
Arnova7နှင့် Arnova 84 Tablets များသည်စတိုးဆိုင်များနှင့်ဘတ်ဂျက်အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
စပိန်နိုင်ငံရှိ El Corte Inglés၊ MediaMarkt, Saturn, The Phone House, Eroski, Leclerc နှင့်Pixmaníaစင်တာများတွင်မကြာမီရရှိနိုင်မည့်ယူရို ၉၉ နှင့်ယူရို ၁၂၉ တို့၏ RRP ဖြင့်အသီးသီးရရှိနိုင်လိမ့်မည်။
Android tablet များအတွက် keyboard keyboard
Logitech Tablet Mouse - Android 3.1 ဖြင့်တက်ဘလက်များအတွက် Bluetooth mouse တစ်ခု။
Sharp Aquos ဖုန်း SH-12C, ဂျပန်အတွက် 3D စမတ်ဖုန်းအသစ်
Motorola Droid X2 အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
Motorola Droid X2 အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Xperia Mini နှင့် Xperia Mini-Pro အသစ်၏တင်ပြချက်
Sony-Ericsson Xperia Mini နှင့် Xperia Mini Pro မော်ဒယ်သစ်များကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့သည်
Samsung Droid Charge, စမတ်ဖုန်းသစ်၏အင်္ဂါရပ်များ
Wired မဂ္ဂဇင်းအရ ၇ ခုမြောက်အန်းဒရွိုက်စမတ်ဖုန်းကို Hack ရန်ဖြစ်သည်
Wired မဂ္ဂဇင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှ Gadget Lab ကစျေးကွက်တွင်“ hackable” အမြင့်ဆုံး Android စမတ်ဖုန်းခုနစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Qwerty ကီးဘုတ်ဖြင့် Samsung Replenish အသစ် 'စိမ်းလန်းသော' Android ။
Qwerty ကီးဘုတ်ဖြင့် Samsung Replenish အသစ် 'စိမ်းလန်းသော' Android ။ အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း Sprint ကမေလ ၈ ရက်နေ့တွင်စျေးကွက်တင်ခဲ့သည်
Andi-One, Android နှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဝေးထိန်းခလုတ်
Andri-One universal remote control သည် Android တပ်ဆင်ထားသောထုတ်ကုန်အသစ်အကြောင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိုပါသည်။
Nook Color သည် Android app များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်
ယမန်နေ့က Barnes & Noble ကုမ္ပဏီက Android application များကို၎င်း၏ Nook Color e-reader တွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ကြေငြာခဲ့သည်။
9000 Gingerbread ဖြင့် Samsung Galaxy S (GT-i2.3.3) ကို root လုပ်ပါ
Samsung Galaxy S GT-i2.3.3 အတွက်ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ Android 9000 Gingerbread ROM နဲ့ root root ရရှိဖို့သင်ခန်းစာ။ Odin နှင့်အတူ Code XXJVK ။ အခြေခံ kernel ။
Samsung Galaxy S အတွက်တရားဝင် Gingerbread ၂.၃.၃ Update ပြုလုပ်ခဲ့သည်
Samsung Galaxy S အတွက်တရားဝင် Android Gingerbread 2.3.3 ROM ကိုပေါက်ကြားခဲ့သည်။ Build code XXJVK တပ်ဆင်မှုညွှန်ကြားချက်များ။
Sony Ericsson က Xperia X10 စမတ်ဖုန်း၏မိုဘိုင်း operating system ကို Android 2.3 Gingerbread သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Toshiba ကပြောကြားရာတွင်၎င်း၏ Android Android Tablet သည် iPad2 ထက်ပိုကောင်းသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
Toshiba က၎င်း၏ Android Tablet သစ်သည် iPad2 ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ပိုကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ။ စျေးနှုန်းဟာ iPad2 နဲ့ဆင်တူပါလိမ့်မယ်။ သူက iPad Killer ဖြစ်ချင်တယ်။
Ubuntu သည် Motorola Atrix တွင်အလုပ်လုပ်သည်
Motorola Atrix အတွက် Ubuntu ဆိပ်ကမ်း
မက္ကဆီကန်ကုမ္ပဏီ Kyoto သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Android တက်ဘလက်ကိုစတင်ခဲ့သည်
မက္ကဆီကန်ကုမ္ပဏီ Kyoto သည် Tablet M902 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၎င်းကို ၁၃၅ ယူရိုအောက်မက္ကဆီကန်ပီဆို ၂,၃၀၀ အတွက် Price Shoes စတိုးဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
LG Optimus One ကို Android 2.3 Gingerbread သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
LG အနေဖြင့်လာမည့်မေလတွင် LG Optimus One စမတ်ဖုန်းသည်၎င်း၏မိုဘိုင်း operating system ကို Android 2.3 Gingerbread သို့အဆင့်မြှင့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်
Airis OnePAD, စပိန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သော Android တက်ဘလက်
Coby Kyros: ကောင်းမွန်ပြီးဈေးသက်သာတဲ့ Android Tablet ၅ ခု
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က Coby ကုမ္ပဏီသည်ယခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသည့်တက်ဘလက်အသစ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောပြခဲ့သည်။ အဲဒီမှာ ...
Samsung Galaxy Mini စတင်မိတ်ဆက်
မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကို Samsung Galaxy Pro ပုံရိပ်တွေပြခဲ့ပြီးမင်းရဲ့ပထမဆုံးပုံတွေကိုပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး ...
Gameloft သည် Xperia Play အတွက်ဂိမ်း ၁၀ မျိုးကိုကြေငြာခဲ့သည်
Gameloft ရဲ့ပထမဂိမ်းကို Xperia Play အတွက်ထုတ်ပေးမှာပါ